Kooxda Dekedda oo guul soo xirtay wajiga hore horyaalka xilli hoggaanka ay la wareegtay – Gool FM
(Muqdisho) 20 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Somali Premier League kaddib guushii ay shalay ka gareen naadiga Gaadiidka, ciyaar ku dhammaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday wiilasha Dekedda.
Wiilasha Dekedda ayaa iminka ku haya hoggaanka 3 dhibcood inkastoo kooxda Elman ay galabta la dheeli doonto naadiga Midnimo, kulankaas ayaa go’aamin kara hoggaanka horyaalka haddii ay Elman ka soo adkaato Midnimo, iyada ayaana hoggaanka qaban doonto, balse Elman oo barbaro iyo guuldarro kala kulanto wiilasha Midnimo Dekedda ayaa sii hayn doonta hoggaanka.
Naadiga Dekedda ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay ku guuleysanaysay horyaalka Somali Premier League, waxayna sanadkan rabta inay markii afaraad ay gacanta ku dhigto.
Dekedda ayaa wajiga koowaad ee horyaalka ku soo gabagabeysay guul, kaddib markii ay shalay dheeshay kulankeedii ugu dambeyay horyaalka qeybta koowaad ee horyaalka, kooxdan ayaa sagaal kulan ay dheeshay waxaa kaliya laga adkaaday hal kulan oo qura iyadoo dhibco ahaan ay haysato 20-dhibcood oo horyaalka ah.
Horyaalka Somali Premier League ayaa sanadkan ah mid aad u xiiso badan waxaana isku haysta kooxaha kala ah Dekedda, Elman, Horseed iyo Mogadishu City Club, kuwaasoo aan dhibco badan kala horreyn marka loo eego kala sarreynta horyaalka kal ciyaareedkan 2019-20.